Ciidamada Fedaralka oo Qabanaya Shirar – Rasaasa News
Jijiga, Aug 11, 2018 – Wararka ka imanaya magaalada Jijiga ee xarunta Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in magaalada Jijiga ay saraakiisha ugu saraysa ciidamada Itoobiya kula shireen qaar ka mid ah oday dhaqameedka dagaanka Soomaalida.
Kulanka waxaa ka qayb galay Janaraal Xassan Ibrahin oo ah taliyaha sirdoonka ciidanka milatariga Ethiopia iyo Janaraal Balaay Seyoum oo ah taliya ciidanka qaybta bariga Itoobiya.
Marka aad fiiriso nidaamka ay samaynayso Itoobiya waa isku mid ilaa iyo Xayle Salaase. Odayada ayey uruursataa oo ay waydiisa nabada dagaanka arintaas oo cabsi galin ah, odayna aslankiisaba kama hadlo nabad.
Ciidamada iyo saraakiisha Itoobiya marna ma ogola in ay horfadhiistaan oo ay talo ama wada tashi la yeeshaan dadka maamulka ku jira ama dadka aqoonyahanka ah ama bulshada oo dhan. Saraakiishu waxay ka hadlayaan Jijiga wixii ka dhacay, laakiin kama hadlayaan wax ka dhacaya xuduuda.
Waxaa Jijiga maanta soo gaadhay saraakiil sirdoon ah oo la socday Janaraal Hassan Ibraahin, waxayna rabaan in ay qab-qabtaan dad aan dambi lahayn.
Magaalada Dire Dawa, ayaa kaga badanayd dhimashada dadka la laayayna waxay ahaayeen dad Soomaali ah, cidi iswaydiin mayso sidaas ayaana lagu dhaafi, laakiin shacaka Soomaaliyeed waa la ciqaabi si loo cabsi galiyo.